ငါ rebooting လုပ်နေတယ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကျွန်တော်တို့ဟာဆရာဝန်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဆေးကုသမှုခံယူပါ။ နာကျင်မှုစိုက်ထူအကြောင်းတရားများအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
အနည်းငယ်ယောက်ျားတွေကို restart စဉ်အတွင်းဒီလက္ခဏာအစီရင်ခံကြပြီ
ငါ copulatory ED ရှိခြင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လတ်တလော PMO မပါသည့်ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်တွင်ပါဝင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုသက်သာခံစားခဲ့ရသည်။ ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူနှင့်အတူအခြိနျမှနျမှနိုးထနှင့်မြေအောက်ရထားစီးရီးနှင့်တူသောအရာတို့ကိုစီးစဉ်အများပြည်သူအနည်းငယ် semis ထွက်ရ (ထိုကဲ့သို့သောဘုံနည်းသော်လည်း) ။
ကျွန်တော့်ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့တာကတကယ်တော့နည်းနည်းနာကျင်စေမယ့်စိုက်ထူခြင်းနဲ့အတူငါနိုးလာမှာပါ။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုငါအရင်ကမကြားဖူးဘူး ဒီဟာကလား ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ပြည့်ဝနေသဖြင့်ငါရရှိသောသူများသည်အနည်းငယ်နာကျင်နေသည်မဟုတ်လော။ ဒီဟာပျောက်သွားမှာလား နှစ်ပေါင်းများစွာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနေကျွန်မရဲ့လိင်တံကိုပျက်စီးစေနိုင်မလား။ နာကျင်မှုအတော်လေးခံနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ငါစိတ်ပူမိတာကစိုက်ထူတဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပါပဲ။
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: မည်သူမဆိုနာကျင်သော nocturnal စိုက်ထူကြုံတွေ့? ငါအိပ်ပျော်နေစဉ် / အိပ်ပျော်နေသော / နိုးသောအခါငါသတိပြုမိလိမ့်မည်။ နေ့တစ်နေ့တာမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့် ၁.၅ လအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည် များသောအားဖြင့်အိပ်မက်သို့မဟုတ်အတွေးများ (သို့သော်ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်အတူပေါ်ပေါက်လေ့မရှိပါသည့်အခါ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုလည်းမရှိတော့ပါ။ အဲဒါကိုဆင်းစေရန်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ညအချိန်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုခံစားရသည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးကဲ့သို့ခဲယဉ်းသော်လည်းကျောက်ကပ်ကဲ့သို့ခက်ခဲသော်လည်း glans များသည်ပျော့ပျောင်းမှုနည်းပါးသဖြင့်သွေးက ဆက်၍ ထုတ်လွှတ်ပေးလိုသည်။
အကယ်၍ ကျုံ့မှုရှိလျှင်၎င်းသည်ရှပ်တက်နှင့်ကျသွားသည်။ ငါအရမ်းစိုးရိမ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမယ့်သွေးပြန်ကြောတွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးမှောင်မိုက်ပြီးထင်သာမြင်သာရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတုန်းငါမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည့်တည့်သုတ်သင်ခြင်းရှိသည်။ ရုံပျော့ပျောင်းသော glans နှင့်အတူ overkill engorgement နဲ့တူပုံရသည်။ ရုံပုံမှန်မခံစားရဘူး။
ဒုတိယအကောင်လေး: ငါစိုက်ထူခြင်းမှအနည်းငယ်နာကျင်မှု၏လက္ခဏာရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါကဘာမှမဆိုးပေမယ့်အခုကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာပိုကြီးလာပြီဆိုတာကိုသတိပြုမိလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုတော့ကျန်တော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တတိယကောင်လေး: ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်လိင်အကြောင်းများစွာစဉ်းစားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်နာကျင်မှုရှိသည်။ အဲဒီမှာစွမ်းအင်ရှိတယ်အဲဒီမှာပါပဲဒါပေမယ့်ပေမယ်စိုက်ထူခြင်းမရှိ။ အဲဒါကျွန်တော့်ငပဲထဲမှာပါ နာကျင်မှု၊ ဓာတ်ငွေ့လိုမျိုး။ သွေးတွေများလာရင်ခဏလေးမဖြစ်သေးဘူး။ ငါမသိဘူး။
တတိယကောင်လေး: ငါမနေ့က2ပတ်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ ပထမအပတ်ကခက်ခဲခဲ့တယ်။ ဒုတိယရက်သတ္တပတ်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအခြေအနေများပိုမိုလွယ်ကူလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တွင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ဖြစ်လျှင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများထပ်မံပေါ်ထွက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ထူးဆန်းသောနာကျင်မှုတစ်ခုသတိပြုမိသည်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှစ။ နံနက်စိုက်ထူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 30% တိုးတက်ပါပြီ။ သိပ်မများပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကျော်လောက်လောက်မှာတော်တော်မြန်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒီဟာကငါပိုပြီးစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်တွေနဲ့တွဲဖက်ပါတယ်)
တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်အချို့ရှိမှမဟုတ်လျှင်နှိုးဆွခြင်းမှမလွှတ်ပေးသောဖိအားသည်မနာကျင်သင့်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုသည်မကြာခဏဖြစ်လွန်းခြင်းသို့မဟုတ်သန္ဓေတည်ခြင်းကြောင့်သင်၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိင်အင်္ဂါများအပေါ်ဖိအားများပြားစေသည်၊ သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်ပြီးနာကျင်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငါဆရာဝန်ဆီသွားပြီးစစ်ဆေးမယ်။ သူက ultrasound နှင့်စာမေးပွဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အနာကြီးရောဂါကဲ့သို့သောအမာရွတ်များ၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့သောပိုမိုပြင်းထန်သောအခြေအနေများမှာပိုမိုဆိုးရွားသော်လည်း၊ တင်းကျပ်သည့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားများကြောင့်သတ္တုတွင်းဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတစ်နေ့လုံးစိုက်ထူရသောအခါ, တခါတရံ, ငါ့လိင်တံအလယ်၌အရင်ကထက်အများကြီးပိုခက်ခဲသည်။ ဒါကြောင့်ခက်ခဲသွားသည့်အခါအမှန်တကယ်နာကျင်။ အရင်ကငါစိုက်ထူတာကိုခံလိုက်ရတယ်၊ အဲဒါကအရမ်းခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဇာတိနည်းနည်းအလယ်မှာဆိုရင်တော့နူးညံ့ပျော့ပျောင်းနေသေးတယ် (ရှင်းပြဖို့ခက်ခဲတယ်) ။ အခုတော့ကျောက်တုံးကျောက်ဖြစ်သွားပြီးနာနေတယ်။
ဒီနေ့ငါကားထဲမှာရှည်လျားစီးနင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့ရက် ၉ ရက်၊ ညနေ ၅း၈ မှ ၈ နာရီအထိကျွန်ုပ်၌တကယ့်ပြင်းထန်သောစိုက်ထူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ di * k အားအဘယ်အရာကခက်ခဲစေကြောင်းမသိသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်နာကျင်ကိုက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့စိုက်ထူသတ်ဖြတ်တစ်ခုခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင့်လက်ကြွက်သားကိုပိုမိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပြီးသင်ကြည့်ရှုသည့်ရုပ်ရှင်ကိုစိတ်ပိုင်းပြန်လည်ပြန်လည်အာရုံစိုက်ပါ။ ထိုအလုပ်ခဲ့တယ်။ နာကျင်မှုကပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ဒီမှာတင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်မှုအကြောင်းစာအုပ်ကောင်းတစ်ခု အဆိုပါထွင်ထားတဲအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ အဖြစ်ကောင်းစွာအောက်ပါဆေးဘက်ချည်ကိုကြည့်ပါ။ ဝဒေနာမြားကိုလညျးဆီးကျိတ်ရောဂါကူးစက်မှု (လျင်မြန်သောကုသမှုအကြံပြု!), unaccustomed ခဝါသည်စိုက်ထူ (သင် recover ကဲ့သို့), ကျန်းမာသန်စွမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, စိတ်အားသန်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း, ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်လွှဲပြောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ဖတ် အသေးစိတျအဘို့ဤချည်.